Ajụjụ | Ikuku oyi Songz Automobile Air Co., Ltd.
1. Ewezuga ngwaahịa ndị edepụtara na weebụsaịtị ahụ, enwere ngwaahịa ntụ oyi ndị ọzọ dị na SONGZ?
Ee, anyị nwere ngwaahịa dịkwa nke ikuku ikuku na igwe eletriki eletrik, biko kpọtụrụ sales@shsongz.com maka nkọwa ndị ọzọ.
2. Kedu mgbe SONGZ malitere R&D nke eletriki ụgbọ ala ikuku?
Anyị malitere R&D tupu 2009, na 2010 afọ mbụ anyị wetara nkeji 3250 n'ahịa. Mgbe nke ahụ gasị, ọnụọgụ ahịa na-eto eto kwa afọ ma na-akụ elu 28737 na 2019.
3. Kedu ihe nke SMC?
SMC (mpempe akwụkwọ Mounding ogige) mejupụtara ihe na-akpụzi site na elu okpomọkụ na ozugbo ịkpụzi, na elu n'ibu ike, ìhè arọ ihe onwunwe, corrosion eguzogide, ogologo ọrụ ndụ, elu mkpuchi ike, aak eguzogide, ire ọkụ retardant, mma akara arụmọrụ, na mgbanwe ngwaahịa imewe, mfe iji mepụta mmepụta, Ma ọ nwere uru nke nchekwa na ịma mma, yana ọrụ nchedo ihu igwe ọ bụla, nke nwere ike izute mkpa nke gburugburu ajọ ọnọdụ na ebe dị na oru injinịa n'èzí.
SONGZ nakweere ihe nke SMC na mkpuchi nke ụgbọ ala ikuku conditioner na SZR na SZQ usoro, na-ebe nke eriri iko mkpuchi.
Nkọwa dị n'etiti SMC & Fiber glass Cover
Typedị usoro Usoro nke imepụta ihe mejupụtara tumadi site na ịrụ ọrụ aka n'okpuru oke okpomọkụ na nrụgide. Usoro a dị mfe, ọrụ ahụ dị mma, enweghị akụrụngwa ọkachamara ọ dị mkpa, mana ogo akụkụ ahụ siri ike ịkwado Mkpakọ ịkpụzi bụ ọrụ nke na-etinye SMC mpempe akwụkwọ-dị ka ịkpụzi onyinye n'ime ebu oghere na a ụfọdụ ịkpụzi okpomọkụ, na mgbe ahụ na-emechi ebu pịa na-enwe ma sie ike. Enwere ike iji mkpakọ mpịakọta maka plastik thermosetting na thermoplastics.
Ngwaahịa dị nro Ezigbo n'otu akụkụ, na àgwà na-adabere na ọrụ ọrụ larịị Ezigbo na abụọ, ezi mma
Nrụrụ ngwaahịa Ngwaahịa a nwere nnukwu nrụrụ ma ọ dịghị mfe ịchịkwa. Ọnọdụ okpomọkụ na ọrụ aka na-emetụta ya nke ukwuu Nrụrụ nke ngwaahịa a pere mpe, ma nwee obere mmekọrịta na ọnọdụ okpomọkụ yana ọkwa ndị ọrụ
Afụ N'ihi usoro ịkpụzi, a na-ekpebi ọkpụrụkpụ ahụ site na ọnụọgụ nke laminated, akwa adịghị mfe ịbanye, egosipụta ahụ adịghị mfe iwepu, na egosipụta dị mfe imepụta A na-ekpebi ọkpụrụkpụ site na nri nri na ebu. N'ihi nnukwu okpomọkụ na ịkpụzi nrụgide dị elu, ọ dịghị mfe ịmepụta egosipụta
Mgbawa 1. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nrụrụ ngwaahịa, ọ dịghị mfe ịchịkwa, ọ dịghịkwa mfe ịwụnye n'oge nrụnye.2. Obere okpomọkụ na-agwọ ngwa ngwa mmepụta, na-akpata micro-cracks na elu ngwaahịa
3. N'ihi obere isi ike nke ngwaahịa ahụ, ekwedo dị ukwuu karịa nke ịkpụzi, na agba elu na-adịkarị mfe na akara nke ngwaahịa ahụ.
Ngwaahịa ahụ kwụsiri ike, ọ gwụla ma ike mpaghara adịghị ezu, nrụgide nrụgide na-eduga n'ịgbawa
Mmepụta Ntinye ego mbu di ala, mmeputa di ala, o adighi nma maka ogbe. Ihe mmepụta a na-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na ọnụ ọgụgụ nke ebu (3-4 iberibe / ebu / 8 awa) Nnukwu ego mbụ, kwesịrị ekwesị maka imepụta oke (180-200 iberibe / ebu / awa 24)
4. Kedu ihe LFT?
A na-akpọ LFT dị ka ihe na-eme ka mmiri sie ike na-eme ka mmiri sie ike ma ọ bụ na-akpọkarị ihe na-eme ka mmiri sie ike nke thermoplastic, nke bụ isi nke PP na fiber tinyere mgbakwunye. Ojiji nke ihe mgbakwunye dị iche iche nwere ike ịgbanwe ma metụta njirimara igwe na ngwa ọrụ pụrụ iche nke ngwaahịa a. Ogologo eriri ahụ n'ozuzu karịa 2mm. Teknụzụ nhazi nke ugbu a nwere ike ịdebe ogologo eriri na LFT n'elu 5mm. Iji eriri dị iche iche maka resins dị iche iche nwere ike nweta nsonaazụ kacha mma. Dabere na njedebe ejiri, ngwaahịa emechara nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ dị warara, ụfọdụ obosara nke efere, ma ọ bụ ọbụna mmanya, ejiri ozugbo maka dochie ngwaahịa ngwaahịa thermoset.
5. Uru nke LFT ma e jiri ya tụnyere obere eriri mesikwuru thermoplastic composites
Ogologo eriri ogologo dị mma na-arụ ọrụ nke ngwaahịa.
Nnukwu ikwesi olu ike na ike a kapịrị ọnụ, nguzogide mmetụta dị mma, ọkachasị dabara maka ngwa nke akụkụ akụrụngwa.
A na-emezi ihe na-emebi emebi. Akụkụ akụkụ dị mma. Na-akpụ nkenke nke akụkụ dị elu.
Ezigbo ike ọgwụgwụ.
Ọ nwere nkwụsi ike ka mma na ọnọdụ dị elu na gburugburu ebe obibi.
N'oge ịkpụzi ya, eriri ndị ahụ nwere ike ịmegharị ihe na-akpụ akpụ, ihe mbibi eriri ahụ dị obere.
Ejirila ihe LFT banye n'ime ikuku ụgbọ ala nke usoro SZR, usoro SZQ, na usoro ahụ dị warara nke usoro SZG.
LFT Ala Shell maka SZG (Warara Isi)